mpihazakazaka lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Ao amin'ny tontolo virtoaly dia afaka manao be dia be ny asa, ary hifindra amin'ny fomba rehetra, ka atero amin'ny aterineto hilalao lalao maimaim-poana mpihazakazaka, ho an-tongotra mba dia lavitra. Ny mahery fo dia mety ho lasa toetra sariitatra, tantara an-tsary, na tantara an-tsary ny olona fotsiny. Zava-dehibe fa nitombo in Mandroso haingana ny hetsika, ary hanatanteraka ny asa fanampiny. Ohatra, Scooby Doo nandositra teo ny milina fitotoana ny angatra sy mitsambikimbikina ny sakana napetraka. Avy ny fahaizany mamikitra izany dia miankina amin'ny winnings, raha ny marina dia tsy isaina ihany ny hafainganam-pandeha, fa koa fahaiza-manao.
Lalao Nanomboka tamin'ny Category:
Farany mpihazakazaka lalao
Lalao Online Rehetra mpihazakazaka lalao
Vonona, Set, Mandehana!
Game litera hafa mandeha amin'ny virtoaly zava-misy. Manidina na mitarika olona iray kamiao, olona mandeha lavitra. Olona maro eto sy ireo mahery fo izay tia ny hihazakazaka – ao amin'ny lalao sasany mihazakazaka endri-tsoratra dia tsy ny fomba hahazoana vokatra, ary ny tanjon'ny mihitsy ny lalao. Ny zalahy mihazakazaka amin'ny ala, fa teny an-dalana dia misy vato misakana isan-karazany. Tsy maintsy nitsambikina amin'ny alalan'ny:
mba hifindra amin'ny alalan'ny lavaka tsy hita noanoa
Tsy vita ny hijanona mihazakazaka, ka raha nisalasala ny hitsambikina, ny toetra tafintohina momba ny zavatra iray na latsaka any an-davaka. Izany dia mitarika ho amin'ny faran'ny ny nihazakazaka sy mamela anao hampiseho vokatra tsara isan-karazany.
Lalao mpihazakazaka ho an'ny isan-tsirony
Ny sasany lalao maimaim-poana dia tsy maintsy mandalo mpihazakazaka maro karazana ny olana, ny tsirairay izay dia ilaina ny manao asa sasany. Ohatra, raha ny anoloana mpihazakazaka dia ambany sakana, dia afaka mitsambikina fotsiny. Raha ny olana avo loatra, dia mety fa ho lavaka ho any izay mety solafaka. Misy ihany koa ny tena mailamailaka mpihazakazaka izay afaka mivoaka mandritra ny mihazakazaka ka solafaka an-tery slit eo afovoan'ny sakana. Ao amin'ny dingana voalohany ireo lalao ianareo dia ho tonga manerana sakana amin'ny karazana iray ihany, ary dia mila fotoana mba hampavitrika ny mitsambikina, sliding na nofonosiny. Fa avy eo ny sakana isan-karazany dia samy tsapaka mifandimby, ary ny fikarakarana ihany no hamela ny maherifo mba ampy mamaly azy. Matetika ny lalana dia hihaona sy mpanohitra izay mikatsaka ny hampitsahatra ny mpihazakazaka – ohatra, ny ratsy tantely hanaikitra azy, matoatoa hampitahorana ny fomba fijery mifono zava-miafina snowballs lalan-diso.
ny lalao Runner azo voalamina amin'ny endrika samihafa: mba ho zaraina ho ambaratonga samy hafa izay ilainao mba handresena ny famerana ny halavirana, na ho mahery fo mba ho tsy manam-petra lalana tsy misy farany – firy kilometatra avy eo afaka mihazakazaka izany eo amin'ny toetrany? Na atleta matihanina - ny mpihazakazaka lalao an-tserasera dia hahita tiantsika izy, ohatra, dia mampiseho ny preliminaries talohan'ny Lalao Olaimpika. Tsy maintsy mifidy ny toetra amam-panahy ka ho entiny eo amin'ny voalohany ny maro nifanesy foko. Mifehy ny hafainganam-pandehan'ny mpihazakazaka tsy ny miasa, fa misy afaka hanome ny faneva manomboka, ary mba hampavitrika ny Hanketo vato misakana – ny lafin-javatra ireo dia miankina amin'ny toerana misy ny atleta amin'ny hatramin'ny farany. Tany eo amin'ny hazakazaka toetra ny maherifo hitsangana miaraka amin'ny fanampian'ny traikefa hevitra, ary izy no voavoatra ho sarotra mafy fifaninanana amin'ny mpifanandrina. Misy ihany koa ny lalao roa izay nanomboka tamin'ny roa mpilalao mifehy ny litera avy amin'ny solosaina iray. Andramo virtoaly hazakazaka eo amin'ny lalao vavahadin-tserasera, fa tsy manadino ny soa azo avy amin'ny tena fifaninanana!